Nezvedu - Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd ikambani yekutengesa, ndeyaQuanzhou Hongda Machinery Co., Ltd.
HONGDA hwakagadzwa muna 1990, riri panzvimbo Quanzhou, inozivikanwa taundi rokumusha mhiri kwemakungwa Chinese, pamwe refu nhoroondo, dzakabudirira hupfumi uye akanaka ezvinhu. Fujian jinjia Machiery Co., Ltd ndeimwe chikamu cheHongda. Iyo kambani yakavambwa mu1990, mushure memakore gumi ekuyedza, ikozvino rave rinotungamira bhizinesi rezvikuru muinjiniya michina ine dzakasiyana siyana dzepasi pevhu zvikamu pane track roller, mutakuri. roller, sprocket, idler uye track cheni uye track shangu uye mukurumbira wakanaka.
Hunhu hwakanaka itsika yekare yekambani yedu .Zvagara zviri zvedu mashandiro mutemo uye zano 'kuita zvakakwana kubva pane zvakanaka uye kuwana 100% kugutsikana'. Naizvozvo michina yemhando yepamusoro yakaunzwa, matarenda akanakisa akaunganidzwa uye tsvimbo dzinogara dzichidzidziswa zvemhando yepamusoro. Zvese izvi zvinovimbisa mhando yakanaka yezvigadzirwa zvedu uye zvinounza mukurumbira pakati pevatengi vedu, izvo zvinopa hwaro hwakasimba hwekushandira pamwe kwedu.
Kusimbisa kukuru kwakasungirirwawo pakutengesa uye mushure mekutengesa sevhisi, Iyo yakazara network yekutengesa uye sevhisi yakagadzwa mumusika wemo uye mu Japani, Korea, USA, Kanadha, EU, Southeast Asia uye Middler Asia nyika dzekupa yakanakira, inokurumidza uye yakakwana sevhisi yevatengi kumba nekune dzimwe nyika.
Tichaita, sezvataigara tichiita, tichiedza nepese paunogona kugutsa zvaunoda.